सहज सेवा र व्यावसायिक सुरक्षाको खोजीमा छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सहज सेवा र व्यावसायिक सुरक्षाको खोजीमा छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता October 1, 2018	0 212 Views
अध्यक्ष– स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समिति
यातायात से वा क्षे त्रको विकास जुनरुपमा बढ्दै गइरहे को छ । यस अनुसारको सहज र व्यवस् िथत से वाको विकास हुन सके को छै न । सहज र व्यवस् िथत से वाको विकास हुन नसक्दा से वाग्राहीले विभिन्न समस् या भो ग्दै आइरहनुपरे को छ भने यातायात क्षे त्रका यी र यस्ता समस्या समाधानतर्फ सम्बन्धित सरो कारवाला पक्षहरुले पनि दे खिने गरी काम गरेका छैनन् । जसका कारण यातायात क्षे त्र अस्तव्यस्ततातिर उन्मुख हुदै गइरहे को छ । यातायात क्षे त्रको सहज से वा, दिगो व्यवस् थापन र व्यावसायिक सुरक्षाबारे स् वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष एवं ने पाल यातायात व्यवसायी महासंघका राप्ती अञ्चल संयो जक भरतनाथ योगीसग नया युगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले गर्नुभएको कुराकानी यहा प्रस्तुत छ । – सम्पादक
स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिले के कस् ता गतिविधिहरु गरिरहे को छ ?
स् वर्गद्धारी टिप्पर व्यवसायी समिति टिप्पर व्यवसायीहरुको संयुक्त छाता संगठन हो  । हामीले टिप्पर व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सल्लाह सुझावसहित व्यावसायिक हक हित, सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा दे खिने कठिनाइहरुलाई समाधान गर्दै व्यवस् िथत र सहज से वाको विकास गर्ने काम गर्दै आइरहे का छौ ं । समितिले नियमित से वा सञ्चालन गर्दै आइरहे को छ । राज्यको नीति नियमभित्र रहे र व्यवसाय र से वा नियमित गरिरहे का छौ ं । टिप्पर व्यवसायमा अलिकति दे खिएको समस् या भने को ओ भरलो डको थियो  । त्यो पनि राज्यले ढाला काट्ने निर्दे शन जारी गरे लगत्तै हामीले त्यो काम पनि पूरा गरिसके का छौ ं ।
व्यवसायीहरु मारमा परे कि ?
ढालाका कारण व्यवसायीहरु निकै मारमा परे का छन् । त्यो हामीलाई थाहा छ । तर राज्यको नीति नियम कसै ले पनि बे वास् ता गर्न सक्दै न । राज्यको नीति नियमलाई पालना गर्नु नागरिकको पहिलो दायित्व हो  । कम्पनीले गाडीसहित ढाला बनाउ“दा के ही हु“दै न । तर व्यवसायीले गाडी खरीद गरी दुई पै साको लागि सडकमा गुडाउ“दा ढाला बढी भो भन्ने दे खिन्छ । राज्यले नै कम्पनीलाई सडक क्ष्ँमता अनुरुपको ढाला निर्माण गर भन्न सक्नुपर्छ । राज्यको बाध्यकारी निर्दे शनले बाध्यतावश व्यवासायीहरुले ढाला काटे र व्यवसाय सञ्चालन गर्नु परिरहे को छ । यो व्यवसायप्रति सरासर अन्याय हो  । तर पनि नीति नियम मान्नै पर्छ । ओ भर लो डका ढालाहरु भन्सारमा नदे खिने जब एकजना व्यक्तिले घरखे त धित्तो राखे र टिप्पर किने र दुई पै साको आम्दानी गर्न खो ज्छ । प्रहरी प्रशासनले ते रो ढाला ओ भरलो ड भो छिट्टै काट भने र भन्छ । यही समस् याले हामी निकै पीडित भएका छौ ं । जसलाई राज्यले गम्भीर तरीकाले सो च्न जरुरी छ । यो समस् याले हामीलाई पीडित बनाएको छ ।
राज्यले यातायात समितिहरुलाई प्रालिमा लै जान नीति निर्देशन जारी गरिरहे को छ । तर तपाइहरुले के कस्ता गृहकार्य गरिरहनुभएको छ ?
सरकारले सबै यातायात समितिहरुलाई प्रालिमा जाने निर्दे शन दिएको छ । सबै यातायात समितिहरुले प्रालिका जाने गृहकार्य पनि गरिरहे का छन् । हामीले पनि टिप्पर समितिलाई प्रालिमा लै जाने आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरिरहे का छौ ं । आगामी मंसिरभित्र सबै यातायात समितिहरु अनिवार्य प्रालिमा दर्ता भइसक्नुपर्ने नीति निर्दे शन जारी गरे को छ । समितिहरुलाई जसरी पनि आगामी मंसिरसम्म प्रालिद्वारा नै सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले हामीले आवश्यक प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहे का छौ ं ।
कस्तो प्रक्रिया ?
स् वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिलाई प्रालिमा लै जानका लागि दिएको म्याण्डे टभित्र रही आवश्यक पर्ने संस् थागत नीति नियम निर्माण, प्रालिद्वारा व्यवसायीहरुलाई हुने फाइदा बे फाइदालगायतका कुराहरु व्यवसायीहरुस“गको छलफल लगायत प्रक्रिया ।
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा समितिले भो ग्नु परे का समस् याहरु के कस् ता छन् ?
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भो ग्नुपरे का समस्याहरु तमाम छन् । ती मध्ये को एक समस् या अघि नै मै ले माथि उल्ले ख गरिसके ं जुन हो ढालाको समस् या । अब कुरा रह्यो बाटो घाटो र प्रहरी प्रशासनको  । प्रत्ये क सडकको अवस् था दयनीय छ । सँघ“ुरा सडक छन् । त्यसमा न फुटपाथ छ । गाडी र पै दलयात्रु लगभग एउटै बाटो मा हि“ड्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा राज्यको ध्यान पुग्न सके को छै न । कुनै कारणले दुर्घटना भयो भने व्यवसायीकै दो ष दे खिन्छ । राज्य व्यवसायीको दो ष दे खाउ“दै पन्छिन्छ । तर सर्वसाधारणले त्यो कुरा बुझ्दै नन् । व्यवसायीकै लापरवाहीले दुर्घटना भएको हो भन्ने गर्दछ । निजी व्यवसायीले सञ्चालन गरे का यातायात से वा क्षे त्रमा राज्य निर्भर छ । तर विभे दकारी व्यवहार राज्यले गर्छ । हामी नागरिकको सहायताका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्दासम्म पनि सरकार र नागरिकले हामीलाई गाडीवालाको नजरले हे र्दा यातायात व्यवसायीहरुले आत्मसम्मान पाउन सके का छै नांै  । राज्यले सडक सुधारमा ध्यान दिदै न । सवारी साधनको संख्या थपको अनुमति जति पनि दिन्छ । पे ट्रो े लियम पदार्थ सहुलियतामा ख्याल गर्दै न । भाडा बृद्धिमा रो क लगाउ“छ । दशकौ ं वर्षअघिका सडकहरु भत्किएर पुरिदै छन् । तर ती सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्दै न । सवारी दुर्घटना सडककै कारणले भइरहे का छन् । नागरिकले त्यो कुरा बुझ्दै नन् । अहिले व्यवसायमा सबै भन्दा मारको व्यवसाय र मर्काको व्यापारीका रुपमा यातायातकर्मीहरु नै रहे का छौ ं । यातायात क्षे त्रको समस् या समाधानका लागि राज्यले ठो स नीति नियम तथा कार्यक्रम निर्माण गरी तत्काल सडक सुधार तथा पुल पुले सा निर्माण गरी पे ट्रो लियम पदार्थमा सहुलियतको व्यवस् था गर्नुपर्छ । हो इन भने व्यावसायीले सञ्चालन गरे को व्यवसायमा यस् तो त्यस् तो भन्न पाइ“दै न । राज्यले आफूले काम गर्न नसक्ने , दो ष हामीलाई थुपार्ने प्रवृत्तिले यस् तो समस् या दे खा परे को हो  ।
टिप्पर आंतक निकै छ नि ? हलुका सवारी साधनको झन है रानीमा परे को गुनासो सुनिन्छन् त ?
हो इन, सडक पनि त साघुरा छन् । त्यो किन दे ख्नुहुदै न ? लो ड बो के का गाडी साघुरो सडकमा हिड्दा अलिकति के ही प्रभाव त परिहाल्छ नि  । हरे क पै दलयात्रु, सवारी चालकहरुले कुरा के बुझ्नु प¥यो भने कुनै सवारी साधन लो ड बो के का हुन्छन् । उसै मा तछाडमछाड गर्दै गाडीहरु दौ डिरहे का हुन्छन् । ठाउ हेरेर ओ भरटे क गर्ने , लो ड वा मालवाहक गाडी आएमा छे उमा साइड लाग्ने गरे मा के ही अप्ठे रो भो ग्नुपर्ने पनि थिएन । दुर्घटना हुने पनि थिएन । अब आफै जान्दाजान्दै दे ख्दादे ख्दै ओ भरटे क गर्न खो ज्ने , लो डको गाडीलाई साइट नदिएर हिड्नाले यस्ता गुनासाहरु सुनिएका हुन् । त्यो कुरा आफूले पनि जान्नु पर्छ । हामीले टिप्पर चालकहरुलाई समय–समयमा प्रशिक्षित गरे का पनि छौ ं । विस्तारै गाडी चलाउने , रातिमा अगाडिबाट व्यक्ति वा सवारी साधन आए नियमित हे डलाइट डिम गर्ने , ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्ने लगायतका थुप्रै कुरा सिकाउ“दै आइरहे का छौ ं ।
नागरिकले गुनासो गर्नु स् वाभाविकै हो  । हामी व्यवसायी हो र त हामी पनि गुनासो गर्छांै  । यी यस् ता गुनासो का आधारमा प्रहरी प्रशासनले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो  । तर त्यो छै न । प्रहरी प्रशासन जब दुर्घटना हुन्छ जो ठूलो गाडी हुन्छ उसै को दो ष दे खाउने परम्परा बसाले का छन् । यही भएर पनि हो ला । तर यो बुझौ ं कि सडकमा हि“ड्दा ठूलाको मात्रै दो ष ह“ुदै न । साना सवारी साधन र पै दल यात्रुहरुको पनि ठूलो दो ष हुन्छ । त्यसको मुख्य कारण ट्राफिक नियमको अभाव हो  । यसतर्फ स् थानीय प्रशासनले ध्यान दिन जरुरी छ ।
टिप्पर सञ्चालनको छुट्टै सडक निर्माणको कुरा पनि चले को सुनिन्छ नि बे ला–बे ला ?
यो कुरा मात्रै हो  । भएका सडकको अवस् था कस्तो छ । बन्न लागे का सडक त वर्षाै ंदे खि अलपत्र छन् । अब टिप्पर चलाउनका लागि मात्रै छुट्टै सडक † त्यो गफ मात्रै हो  ।
दुर्घटना बिमा नि ?
जब दुर्घटना भयो तत्काल घटना पीडितले पै सा चाहियो भन्छन् । बिमाले एउटा व्यक्ति दुर्घटनामा परे मा उपचारका लागि तीन लाखसम्म दिन्छ । मृत्यु भएमा पा“च लाख । तर उपचारमा त्यो भन्दा बा“की थप रकम व्यावसायी आफै ले व्यहो र्नुपर्ने बाध्यता छ । यो निकै समस् याका कुरा हो  । अब राज्यले यो कुरालाई तत्काल समाधान गर्न पीडित र व्यवसायीको न्यायप्रति दुर्घटना विमाको रकम बृद्धि गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा थप के ही छ ?
स् वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिद्वारा दुई सय ४८ वटा टिप्पर सञ्चालनमा छन् । जुन हामी ऐ न नियमभित्रै रहे र सञ्चालानमा छांै  । तर प्रहरी प्रशासनले अलिकति सामान्य कुरामा पनि बढी दुःख दिने चलन छ । यसलाई समाधान गरी सहज र सुरक्षित व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा सबै को सहयो ग रहो स् । सडक, पुलपुले सा निर्माणमा राज्यको ध्यान पुगो स्  ।
Previous: प्याव्सन घोराहीको अध्यक्षमा चन्द
Next: अनुदानको तोरी ‘गुपचुप’मा बाँडियो